Agarsiisa wabii ammee man'eetiif, hangaa man'eetii filatteme, yokkan bakka maqaa. hangii man'eetii filteemef fillu ni dandessa, hangii maqaa itti fufiiti barressi Sanduuqa Maqaa.
ida'a man'ee hangii man'ee ammeeti saagi, yokkan gatii ida'a man'ee filattemti sagi. man'een keessa cuqaasi, sajoo kanna cuqaasi, itti fuufi man'eeti hangii itti mijeessi. Yokkan man'eeti murtta'an filadhuu gatiin ida'a itti saagamman , itti fuufi sajoo cuqaasi.
ammee man'eeti foormulaa ida'ii. sajoo kan cuqaasi, itti fufii foormulaa kana galchi Naqaa Sarara.
qabiyyee kana qulqulleessi Naqaa sarara, yokkan foormulaa issa durssee jiiru irratti gootee dhiisuu.
qabiyyee kana fudhachuu Naqaa sarara, itti ansuun qabiyyee ammee man'eeti galchuu.
foormulaa issa ammee man'eeti ida'uu barbadee galchii. kana cuqaasi Dalagaa Masaka sajoo dalagaa durmurtaawaan iddo foormulaa galchuu.
Title is: Kabala Foormulaa